ko htike's prosaic collection: February 2009
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒု-ဝန်ကြီး ဒေါက်တာပိုင်စိုးရဲ့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်။
သားဖြစ်သူအတွက်၊ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်ကျူးလွန်ထားတဲ့၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာပိုင်စိုးကြောင့်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်လောကအတွင်း၊ ဆူဆူညံညံဝေဖန်သံတွေ၊ ကြားနေရပါ တယ်။
စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ဆွေမျိုးတော်စပ်မှုကို၊ အခွင့်အရေးယူခါ၊ ဌာနမှထုတ်ပြန်ထား သောဥပဒေကို၊ ဘေးဖယ်ထားပြီး၊ မိမိ၏သားဘွဲ့ရရှိရေးအတွက်၊ အတင်းအကျပ်အမိန့်ပေးဆောင်ရွက် စေခဲ့မှုအပေါ်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများမှ၊ မကြေမနပ်ဖြစ်နေကြကြောင်း၊ ကြားသိရပါတယ်။
ဆေးတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်၊ အပိုင်း(ခ) အောင်မြင်ပြီးသောအခါ၊ သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများတွင်၊ အလုပ်သင်ဆရာဝန် (House Surgeon) အဖြစ်၊ တနှစ်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း၊ ဆေးပညာ (Medicine)၊ ခွဲစိတ်ပညာ (Surgery)၊ မီးယပ်သားဖွားပညာ (O.G) နှင့် ကလေးဆေးပညာ (Paediatrics) တို့ကို၊ (ဘာသာရပ်တခုစီအတွက်၊ သုံးလခန့်)ဆက်လက်သင်ကြားလေ့လာရပါတယ်။
အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ်၊ တနှစ်ပြည့်ပြီးသည့်အခါ၊ သက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခများမှ၊ ကျေနပ်ဖွယ်ရှိ ကြောင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးမှသာ၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီး၊ M.B,B.S ဘွဲ့ကိုပေးအပ် တာပါ။
ဒုတိယဝန်ကြီး၊ဒေါက်တာပိုင်စိုးရဲ့သားဖြစ်သူ၊ “သက်စိုးပိုင်” နဲ့ အပေါင်းအပါ၊ ခုနှစ်ဦးဟာ၊ အလုပ်သင် ဆရာဝန်အဖြစ်၊ (၆လခန့်)တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော်လည်း၊ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရဲ့ (၄၅)ကြိမ် မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို၊ အပြုံးဝေဝေဆာဆာနဲ့၊ တက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။
သက်စိုးပိုင်ဟာ၊ Medicine နဲ့ O.G ဘာသာရပ်တို့အတွက်၊ (၆)လခန့်၊ ဆေးရုံဆင်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခတွေက၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်း၊ မရှိတာကြောင့်၊ ဘွဲ့နှင်း သဘင်တက်ရောက်ခွင့်မရှိကြောင်း၊ စာထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့၊ဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာပိုင်စိုး တယောက်ဒေါသပုန်ထပြီး၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းမရှိတဲ့၊ ပါမောက္ခများကို၊ အာဏာပြဟိန်းဟောက် ခြိမ်းခြောက်ပါတော့တယ်။
သားဖွားမီးယပ်ပါမောက္ခ၊ဒေါက်တာချယ်ရီသန်းသန်းတင်မှာ၊ အငြိမ်းစားယူရန်၊ တလခန့်သာလိုတော့ တာကြောင့်၊ အလျော့ပေးကာ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးပညာပါမောက္ခဒေါက်တာ ညွှန့်သိန်းကတော့၊ အဆူအဆဲဒဏ်ကြံကြံခံ၍၊ လက်မှတ်မရေးထိုးဘဲ၊နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တော့၊ အထက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့၊ အထူးညွှန်ကြားချက်အမိန့်နဲ့၊ သက်စိုးပိုင် နှင့် အပေါင်းအပါ(၇)ဥိး ကို၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင် တက်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။
ဒီကိစ္စကြောင့် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒေါက်တာအေးမောင်ဟန်က၊ နှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ ပါတယ်။ ယခင်ကလည်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့မြေး၊ “နေရွှေသွေးအောင်(ခ)ဖိုးလပြည့်” ရဲ့ချစ်သူ နေခြည်လင်းလဲ့ နှင့် သူ့အပေါင်းအသင်းတွေ၊ ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်လို့၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မပြုခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဖိအားပေးစဉ်က၊ တကြိမ် နှုတ်ထွက်ခွင့် တောင်းခံခဲ့ဘူး ပါတယ်။ ဆရာကြီးအား Extension ပေးထားတာ၊ (၂)နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း၊ နှုတ်ထွက်ခွင့်လုံးဝမ ပြုပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာလောကရဲ့၊ ဂုဏ်သိက္ခာကို၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်၊ အမိန့်အာဏာတွေ ပေးပြီး၊ ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်၊ အရည်အချင်းမပြည့်မှီတဲ့၊ ဆရာဝန်တွေမွေးထုတ်ရာ၊ နေရာတခု အဖြစ်၊ ရောက်ရှိတော့မှာကို၊ တွေးပြီးရင်လေးမိရပါတယ်။
ONE MORE SCANDAL AT INSTITUTE OF MEDICINE (1)
When the Medical Students passed the examination of Final Part (2), they are to proceed to concerning Hospital for internship program and serve as House Surgeons. Term for House Surgeon take about approximately one year as their time was divided equally for study the Medicine, Surgery, O.G (Obstetrics and Gynecology) and Pediatrics. Each subject takes about3months and altogether one year to be completed. Every end of three months program, House Surgeon must obtainasignature from Professor (Department Head) for completion and satisfactory of performance. Without completion of above program, no one in the history of Burma Medical Institute can hold of the M.B, B.S Degree and hadaright to attend the Convocation for Graduation Ceremony.
But the exception for Grandnephew of Dictator Than Shwe, whose father is alsoaDeputy Minister in Ministry of Health can by-passed the above program and obtain the Medical Degree and attend the Graduation Ceremony.
His name is Thet Soe Paing and his father is Deputy Minister Dr. Paing Soe. He is not alone taking that special privilege but together with his7close friends. All of them were not attending for the subjects of O.G and Medicine in House Surgeon Program. Concerning Department Heads refused to sign their documents and official notice was issued to them as they are not entitled for the Graduation Ceremony.
Dr. Paing Soe was in fit of fury and threatening the two Professors who refused to sign the paper for his son and the gangs. O.G Professor Dr. Cherry Than Than Tin is only one month more to serve before retirement and finally give in for the case and sign the paper. Medicine Professor Dr. U Nyunt Thein is boldly defiance for the threat and refuse to sign.
Finally, the order from higher level was issued and instructed all concerning parties to allow the Thet Soe Paing and Gangs of Seven case to be closed and they are to attend the Graduation Ceremony.
For that above case, Rector of I.M (1), Professor Dr. Aye Maung Han was so upset and submitted the resignation letter to higher authority. He did it once when dictator Than Shwe grandson’s fiancée and friends were allowed by higher authority to participate the exam without completion of compulsorily requires attendance, which was by-passing his authority. Both requests were ignored although he is already 62 years old and two years overdue for retirement served under extension term.
How we Burmese people to survive with such kind of wayward students became Medical Doctor? How long the reputation of Burmese Medical standard to be maintained if unprofessional higher level interruptions continue.
Posted by ကိုထိုက် at 11:34 13 comments
စစ်အာဏာရှင်ကြီးသန်းရွှေတယောက် သားမက်ဖြစ်သူ နေစိုးမောင်(ကထိက၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်) ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ စေလွှတ်ဘို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ နေစိုးမောင်ဟာစစ်ဆေးရုံမှာ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ တင်မင်းလည်း အတူလိုက်ပါသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟားဘတ်(စ်)တက္ကသိုလ်မှာ “သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုလေ့လာရေး”အတွက် အကြောင်းပြပြီး အမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ http://www.harvard.edu.
နေစိုးမောင် ဟာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့သမီး၊ ကြည်ကြည်ရွှေ (ခေါ်) မသြ ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သလို၊ ဆိုးသွမ်းအကြမ်းဖက်လူငယ် နေရွှေသွေးအောင် (ခ) ဖိုးလပြည့် ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ မသြ ဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူ နေစိုးမောင်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကြောင့်၊ မသြရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက် နာမည်ကြီးစီး ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး တေဇ ကအစွမ်းကုန်ပြုစုဂရုစိုက်ပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက နေစိုးမောင်ဟာ ယောင်္ကျားကိုယ်နဲ့မိန်းမစိတ် ( မိန်းမလျှာ ) ဖြစ်နေလို့ပါ။ စစ်ဆေးရုံ အသိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လောကမှာ သူကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့တာပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊လူ့အခွင့်အရေးအဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်နေတဲ့ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ မိသားစုဝင် တဦးကို၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ၊ ဒီမိုကရေစီအတွက်၊ အသက် ပေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို လှည့်စားဘို့ကြိုးစားတဲ့လုပ်ရပ်တခုအဖြစ်သတ်မှတ် ရမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ၊ အမေရိကန်သံရုံးက နေစိုးမောင်ရာဇဝင် မသိဘဲတော့မနေပါဘူး။ ဗီဇာထုတ်ပေး၊မပေး စောင့် ကြည့်ရမှာပါ။ သမ္မတသစ် အိုဘားမားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိတဲ့မူဝါဒတွေ အပြောင်းအလဲရှိ၊မရှိ ဒီကိစ္စက အသေးငယ်ဆုံး အချက်ပြချက်တခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာနိုင်စရာရှိပါကြောင်း။
IS US GOVERNMENT WELCOMING DICTATOR THAN SHWE FAMILY MEMBER IN USA?
His name is Lt-Col; Nay Soe Maung (Retired army doctor) and presently served asaLecturer in University of Public Health, Ministry of Health. He isason in law of Burma most notorious dictator General Than Shwe and son of retired Major General Tin Sein.
All above credentials are more than enough for him to earn special privilege above others as now he is preparing to go to Harvard University (http://www.harvard.edu). Person accompanied him is Dr. Tin Min, Rector of same depart¬ment and now they are preparing necessary documents to apply visa in US Embassy, Yangon. We wonder whether US Embassy and Government have no knowledge of their back ground or just ignore to please the junta and dictator of the most human right ab¬user.
Lt-Col; Nay Soe Maung isafather of notorious Nay Shwe Thway Aung (a) Pho La Pyae and Husband of Kyi Kyi Shwe (a) Ma Aw. Now Kyi Kyi Shwe isafamous mi¬stress of Tay Za ( Htoo Trading and AirBagan ). Nay Soe Maung is also famous for his homosexual activity and he is openly declaring his status asagay. With all that good reputation, he will represent Burma and grabachance to study in Harvard by help of US Government.
Is US Government already abandons the Human Right issue and collaborated with dictator?
Posted by ကိုထိုက် at 16:23 12 comments
Posted by ကိုထိုက် at 12:147comments
ပြည်တွင်းမှ မိတ်ဆွေများ သတိရှိကြပါရန်
(GW မှ ပေးပို့သော သတင်းအချက်အလက် ဖြစ်ပါသည်။)
2009 ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီလများအတွင်း Campaign များပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုစတာများချိတ်ဆွဲခြင်း၊ မှူုတ်ဆေးများဖြင့်ရေးဆွဲခြင်း၊ စာဖြန့် ခြင်း၊ စာကပ်ခြင်းများ၊ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ မြို့ နယ် မယက၊ရယကများ၊ အရံမီးသတ်များ၊ ကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် စွမ်းအားရှင်များထံသို့၁၃၊ ၂၊ ၂၀၀၉ နေ့ တွင်
ညွန်ကြားချက်ပေးပို့ မူ့ များရှိကြောင်း၊ ညွှန်ကြားချက်တွင်
၁၊ မိမိတို့ မြို့ နယ်၊ ရပ်ကွက်၊လမ်းများတွင် စာဖြန့် ၊စာဝေ၊ စာကပ်ခြင်း၊မှုတ်ဆေးမှုတ်ခြင်း၊
ပိုစတာချိတ်ဆွဲခြင်း တို့ ဖြင့် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးများမဖြစ်ပေါ်စေရန် နေ့ ညစောင့်ကြည့်ရန်၊
၂၊ ၄င်းဆန့် ကျင်ရေးပြုလုပ်သူကိုဖမ်းမိပါက တယောက်ဖမ်းမိပါက ၅၀၀၀၀ ပေးမည်။
၃၊ ဆိုက်ကားဂိတ်များ၊ ဈေးသည်များအနီးတွင် ဆန့် ကျင်စာဖြန့် ဝေကပ်ခြင်း၊ မမ်ိပါက ဆိုက်ကားဂိတ်သိမ်းမည်၊၊ ဈေးမရောင်းရသတ်မှတ်မည်၊ ဆိုက်ကားသမားများ၊ ဈေးသည်များမှ ဖမ်းပေးရမည်၊
၄၊ အသစ်ဖွဲ့ စည်းထားသော အရံရဲအဖွဲ့ ဝင်များကို ပိုမိုတာဝန်ချထားရမည်၊
၅၊ မြို့ နယ်ရဲစခန်းများမှလည်း လှည့်ကင်း၊၀ပ်ကင်း၊ ရပ်ကင်းများ၊ နေ့ ညပိုမိုချထားရမည်၊
၆၊ အဓိကအားဖြင့် ကြံ့ ခိုင်ရေး၊ စွမ်းအားရှင်၊ အရံရဲတို့ ကို ပိုမိုတာဝန်ပေးချထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွန်ကြားထားသည်ဟုသိရှိရပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ဆန့် ကျင်လှုပ်ရှားမူ့ များမဖြစ်ပေါ်စေရေးကို
မြို နယ်အလိုက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားပါက အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်၊
● မိမိတို့ ၏ရဲဘော် ရဲဘက်များအနေဖြင့် အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမူ များကို သတိထားလုပ်ဆောင်ရန် လိုပြီး၊ နည်းလမ်းအသစ်များသုံးပြီး၊ ၀ါဒဖြန့် ဆန့် ကျင်မူ့ များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်၊
● မြို့ နယ် တခုချင်းအလိုက် အရံရဲ ထောင်ဂဏန်းရှိပြီး ၄င်းတို့ အား သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်၊
Posted by ကိုထိုက် at 09:347comments
ရွှေတီဂုံဘုရား အလှူခံပုံး နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စ
ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီးသော ရွှေတိဂုံဘုရားနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စ ရပ်ကို ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေ တချို့ စုံစမ်းထားသော နောက်ဆက်တွဲ အချက်အလက်များကို ထပ်မံ တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ပထမ ပို့စ်မှာ ကျွန်တော် ဘလော့ တစ်ခုတွင် ဖတ်ရသော အကြောင်းအရာပေါ် တည်မှီ၍ ရေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခု ပို့စ်မှာ ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေ ပို့လာသော ပို့စ်ကို ပြန်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်၏ လူမျိုးနှင့် ဘာသာ တရားအတွက် လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ နအဖ၏ လှည့်ကွက်၊ ရက်စက်ယုတ်မာမှု စသည်တို့ကို သတိတရားကြီးကြီးဖြင့် စောင့်ကြည့် တုံပြန်သင့်ပါသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရားအလှူခံပုံး နဲ့ ဘာသာရေးသွေးခွဲရန်ကြိုးစားမှုလုပ်ရပ်။
“လေးဆူဓါတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ နှင့် ဘာသာရေး စော်ကားခံရခြင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းသစ်” ကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ အများနည်းတူ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြပါတယ်။
ဒီဘလော့ဆောင်းပါးမှာ မူရင်းလင့်(ခ်) ကိုဖေါ်ပြပေးထားတာကြောင့် ဆောင်းပါးရှင် “မမ” ရဲ့ကိုယ်တွေ့အဖြစ် အပျက်လို့ယူဆရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို သေသေချာချာဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်မိပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် “မမ” ရဲ့မှတ်ချက်အရ၊ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမေးမြန်းသိရှိခဲ့ရသည့်တိုင် (ဂေါပကလူကြီးတဦးမှဝန်ခံ ထားသော်လည်း) လက္ခံနိုင်ရန် ခက်ခဲနေတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာလို့မှတ်ယူမိပါတယ်။
သာမာန်အားဖြင့် ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုမိသူတိုင်း၊ စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူတိုင်း၊ ဒီရင်နာစရာ ကိစ္စကြီးကြောင့်၊ဒေါသဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာ သာမာန်အခြေအနေထက် ကျော်လွန်ပြီး၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အထိ ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ( အဲဒီလိုဖြစ်လာလို့ကတော့၊ စစ်အစိုးရ အကြိုက်ပေါ့။)
ဒါကြောင့် “မမ” ရဲ့ဆောင်းပါးပါ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းဟာ၊ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းမသားတဦးရဲ့ရင် တွင်းခံစားချက်အစစ်အမှန်လား ဒါမှမဟုတ် စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းက များ ဘာသာရေးပြဿနာ ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ဖန်တီး ရေးသားထားတာလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေအရ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းတွေ့တိုင်း ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေဖန်တီး ပြည်သူတွေ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်စေပြီး အုပ်ချုပ်သူတွေ ထွက်ပေါက်ရှာတာ ဒီနိုင်ငံမှာအစဉ်အလာတခုလို ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နယ်ချဲ့အစိုးရကအစ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်အဆုံး ဒီနည်းလမ်းကိုဘဲ သုံးခဲ့ကြတာပါ။
ရွှေတိဂုံဘုရားအလှူခံပုံးကိစ္စအတွက် အခြေအနေမှန်သိရဘို့ သာသနာရေးဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံများတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအချို့အား တွေ့ဆုံလေ့လာခဲ့ရာ “မမ” ရဲ့ ဆောင်း ပါးပါ အချက်အလက်ဟာ လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့လုံးဝလွဲမှားနေတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ဂေါပကအဖွဲ့အနေနဲ့ အချို့သောလုပ်ငန်းများကို ဂေါပကအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်အညီ ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း အလှူခံပုံး(ဘုရားအတွက်အများပြည်သူလှူတမ်း ထားသည့်ငွေများ)အားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း ကိုမှကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်း နှင့် နေ့စဉ်ညတိုင်းဂေါပကအဖွဲ့ဝင်အချို့ နဲ့ သံဃာတော်များ ရှေ့မှောက်တွင် ဝန်ထမ်းများမှ အလှူခံပုံးများအား၊ ဂေါပကရုံးခန်းအတွင်း သယ်ဆောင်ပြီး အလှူငွေများအား ရည်တွက်၍ စာရင်းပြုစုကြရကြောင်း၊(ကျပ်ငွေ၊ ဒေါ်လာ၊ အက်(ဖ်)အီးစီ စသဖြင့်) နှင့် နောက်တနေ့ နံနက်ဘဏ်ဖွင့်ချိန်တွင် ဘဏ်သို့သွားရောက် အပ်နှံ ကြရကြောင်း၊ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
အချို့သောလုပ်ငန်းများကို ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့်ခွင့်ပြုရာတွင်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအ တိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုပြုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
မိမိတို့အနေနဲ့ ယခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘာသာရေးပြဿနာ လူမျိုးရေးပြဿနာ များမဖြစ်အောင်ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ရမဲ့အချိန်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လှည့်ကွက်ထဲ မဝင်မိကြစေရန် မေတ္တာရှေ့ထား သတိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 09:57 11 comments
Posted by ကိုထိုက် at 22:14 28 comments
Posted by ကိုထိုက် at 06:27 8 comments
အာဏာကို လက်လွှက်ရမှာ သေမလောက် ကြောက်နေပြီး လောဘ ရမက်ကြီးလှတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကြီး သန်းရွှေ တယောက် ယတြာချေတာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အကုသိုလ် အကျိုးပေးကတော့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေပါတယ်။
အများသိရှိထားခဲ့ကြသလို ဇလွန်မှာ ယတြာချေဘို့ လုပ်စဉ် သက်တော်စောင့် ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးရှိန်ပေးတဲ့ မီးချစ်က မီးမတောက်တာကြောင့်၊ ဘုရားဂေါပကများ စီစဉ်ထားတဲ့ မီးချစ်ကို အာဏာရှင်ကြီးသန်းရွှေထံ လှမ်းပေးစဉ် လက်ထဲမရောက်ဘဲ အောက်သို့ ပြုတ်ကျသွားတာကြောင့် အာဏာရှင်ကြီး အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
အသိဥာဏ်နဲ့ ဆင်ချင်တုံတရား ကင်းမဲ့လှတဲ့ အာဏာရှင်ရဲ့ တချက်လွှတ်အမိန့်ကြောင့် မယက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရင်ထွန်းကို ညတွင်းချင်း အလုပ်ဖြုတ်ပြစ်ခဲ့ပြီး တာဝန်ရှိ ဦးစီးအရာရှိတဦးကို တံတားဦးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ချောက်ထဲတွန်းချဘို့ ခိုင်မာတဲ့ဦးတည်ချက် တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေနဲ့ နေ့မနား၊ ညမအား ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့် ခါးနာဝေဒနာ ခံစားနေရပေမဲ့ ရည်မှန်းချက် မပြည့်ဝမှာ စိုးရိမ်မိတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ချောက်ထဲ တွန်းချနိုင်ရန် ဗေဒင်ဆရာရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အပြေးအလွှား ယတြာချေနေရတာပါ။
ခါးနာရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာလို့ ငွေဆောင် ပင်လယ်ကမ်းခြေ ခရီးစဉ်ကတဆင့် ရန်ကုန်မှာ ခေတ္တနားပြီး နေပြည်တော် အပြန်မှာ ဇလွန်ယတြာမအောင်မြင်တာကို အမြန် အစားထိုး ဆောင်ရွက်ရန် ဗေဒင်ဆရာက ထပ်မှန်ညွှန် ကြားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီတခါမှာတော့ နေပြည်တော်မှာ စစ်အုပ်စုက တည်ထားကိုးကွယ်မဲ့ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော် (တည်ဆောက်ဆဲ) မှာ ယတြာချေခိုင်းတာပါ။ စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဘုရားရှိခိုးပြီး ယတြာချေဘို့အထမှာ ရပ်ပြီးပြီးခြင်း ဖင်ထိုင်လျှက် ပြုတ်ကျသွားတာကြောင့် အရေးပေါ် လူနာတင်ကားနဲ့ ခုတင်(၁၀၀၀) စစ်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်လိုက်ရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်ကြီးကို သယ်ဆောင်သွားတဲ့ MSF မှ လှူဒန်းထားတဲ့ ခေတ်မှီ လူနာတင်ယာဉ်ဟာ လေအေးပေးစက် ချို့ယွင်းနေလို့ တာဝန်ရှိအရာရှိဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးထက်ဟာ ဆူပူကြိမ်းမောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကကဆေး မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်သန်းအောင်ရဲ့ တပည့်ရင်းဖြစ်တာကြောင့် အကြီးအကြယ် အရေးယူမှု မရှိခဲ့တာပါ။
ခုတင်(၁၀၀၀)စစ်ဆေးရုံမှာ ရက်အတန်ကြာ ကုသမှုခံယူပြီး ယခုအခါ စစ်အာဏာရှင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ ဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေပါတယ်။ မည်သည့် နိုင်ငံရပ်ခြားဧည့်သည်ကိုမျှလက်ခံမတွေ့ပါ။
(မှတ်ချက်။ သတင်းပေးပို့သော တပ်မတော်အရာရှိ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား မဖေါ်ပြခြင်းအပေါ် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။)
ယတြာအပေါ်မှာသာ ဖက်တွယ်အားထားနေရှာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ ဘဝဇတ်သိမ်းမကောင်းပုံကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။
Posted by ကိုထိုက် at 22:40 24 comments